OHERE ADỊGHỊ N’OBI GỌỌMENT ENUGWU! – Mbaka – hoo!haa!!
Onye ndu ogige ekpere ndi ụka katọlik n’Enugwu, akpọrọ ‘Adoration Ministry Enugu Nigeris’, (AMEN), bụ Rev. Fr. Ejike Mbaka, nọrọ n’Enugwu ụnyahụ bụ ụka kwue hoohaa, na ohere adịghị n’obi gọọment steeti Enugwu, n’afọ puku abụọ na iri na itolu na-abịa abịa. N’okwu ya, aka na-achị yabụ steeti bụ Ifeanyị Ugwuanyị, abụrụla ọkaibe n’ọchịchị steeti Enugwu. N’ihi nke a, Mbaka kwuru na o kwesịrị na aga-enyekwa Ugwuanyị ohere ka ọ chịrị yabụ steeti gaba n’ihu.
Mbaka toro Ugwuanyị ka o siri jikwaa, nwa obere akụnụba fọrọ n’akpa steeti Enugwu mgbe ọ batara n’ọchịchị. Ọ kọwara Ugwuanyị dịka onye nwere obi ebere, onye chọrọ udo nakwa onye na-atụ egwu Chineke.
Ụkọchukwu ndi Katọlik a, kọwara Ugwuanyị dịka onye karichagoro ndi ọzọ chịa steeti Enugwu nke ọma, onye bụ udo n’onwe ya, ụlọ nsọ nke ikpezi esem okwu nakwa onye ana-elegara anya maka mmepe imerime obodo na idozi obodo ndi mepegoro emepo.
Mbaka kwuru ihe ndi a n’Enugwu ụnyahụ, mgbe ọ na-ekwu okwu n’ofufe nru Ugwuanyị jiri tụọrọ Chukwu mma mma maka ugo ọ turu n’ụlọikpe ukwu nke ala anyị. Mbaka kelere Chineke ka o si nye ndi steeti Enugwu onye dịka Ugwuanyị were kwue na nke a bụ izizi Enugwu dị n’udo eri mgbe ejiri chie ya ụkọchukwu.
Mbaka toro Ugwuanyị n’ihi na ọ na-agba mbọ ikwụ ndi ọrụ ụgwụ n’ime abalị iri abụọ na ise nke ọnwa ọbụla. Ọ sị na ọbụladị mgbe ndi steeti ndi ọzọ na-enwe ihe nhịa ahụ ka ha ga-esi kee ego mmachị akpa nke gọọmenti etiti na-enye, na Ugwuanyị na-akwụchapụ ndi ọrụ ya ụgwọ ọnwa ha.
Mbaka toro Ugwuanyị n’ihi na ọ sịrị na ọbụ itụ egwu Chineke dị n’ime ya ka o jiri nwee ike irụ ụdị ọrụ ndi a ma nwekwa ike inye onye ọbụla na obodo ọbụla oke rutere ha.
Mbaka kpere ekpere megide ike ọbụla ga-ebili imegide agam-n’ihu Ugwuanyị ibụ aka na-achị steeti Enugwu na nhọpụta nke aga-eme n’afọ na-abịa abịa.
Ọ sịrị na Ugwuanyị ga-akaba ahụ kwụrụ ma rụtọpụ ọrụ ọma ya na steeti Enugwu n’ihi na ndi eze ọdị n’ala, ndi nkuzi, ụmụ akwụkwọ tinyere ọtụtụ ndi ọzọ kwụ ya n’azụ.
Mgbe Mbaka na-eto Ugwuanyị maka ụzọ ụlọ ụka ahụ dị n’Emene ọ rụrụ, ọ gwara, ka ha ra, bụ ndi na-elegara ịzọ ọkwa dịka aka na-achị steeti Enugwu anya,
ka ha chọọ ma họrọ ọkwa ọchịchị ọzọ ha ga-azọ.
Na nzahachị ya, Ugwuanyị kenere ndi ekpere AMEN maka nkwado ha na ekpere ha nke mere ya ji nwee mmeri n’ụlọikpe ukwu.
Ugwuanyị sịrị n’ọbụ n’ụlọ ekpere AMEN, bụ ebe mbụ ya bu ụzọ kpọtụrụ mgbe ya malitere ichọ ngọzị nke Chukwu maka inye ndi steeti Enugwu ọchịchị dịka o si kwesị ekwesị.
Ọ sịrị na taa, na ya alahachitela azụ n’otu ebe a inyekwa Chineke ekene maka mmeri onyere ya n’ụlọ ikpe ukwu.
Okpere ekpere na Chineke ga-emekwa ya ka o si mee ya na mbụ, n’afọ puku abụọ na iri na ise. ma kwee nkwa na ya ga-eji ịtụ egwu Chineke were rụtọpụ ọrụ nke ọ hanyere ya n’aka na steeti Enugwu.
N’ikpe azụ, ọ kpọkuru ndi niile ya na ha soro zọọ ọkwa ọchịchị ka ha bịa ka etikọọ isi ọnụ, ịhụ na steeti Enugwu n’aga n’ihu.
Previous Post: EGO/ỤBA/OGBENYE
Next Post: NNUKWU ỤKỌCHUKWU N’ARỤSỊ AGBAALA MGBA